Uhlu lwezinqubo zokugwema udokotela wamazinyo...
Ukukhokha ama-euro angu-500 kudokotela wamazinyo akukuhle. Ngaphambi kokuthi ngigeze amazinyo kanye noma kabili ngosuku (ngezinye izikhathi nganginganaki kusihlwa ngenxa yokulala ...), kodwa uma ngibheka ukuthi6 imigodi yangaphakathi kwamazinyo, ngokusobala ayanele. Ngakho-ke, nali uhlelo lwami olusha lokugcina inhlanzeko yomlomo eqinile:
Thatha iphilisi lamavithamini njalo ezinsukwini ezimbalwa (yize lawo anemithamo yansuku zonke). Amaphilisi kavithamini aqukethe namaminerali ngakho kufanele asize ngokubola kwamazinyo. (10€ ngonyaka)
Sebenzisa isixubho sikagesi esinamandla kakhulu, bengisebenzisa i-4000rpm, ngenkathi manje ngine-30000rpm eyodwa, amasha anephethini yokudlidliza ezinzile engicabanga ukuthi kubalulekile ukufinyelela amabala phakathi kwamazinyo naphakathi kwamazinyo nezinsini. (30€/kanye)
Sebenzisa imithi yokuxubha amazinyo amabili ahlukene, ekuseni sebenzisa eyodwa ukuze uvikeleke (ene-biomimetics/fluoride/olaflur/njll.. njengesimiso esisebenzayo) futhi kusihlwa sebenzisa isibulala-magciwane (i-mouthwash-based/herbs). (2€/umuthi wokuxubha)
Ngenxa yokuthi ukufloss kungase kudle isikhathi esiningi, ngikhethe ukusebenzisa isicoci se-ultra sonic njalo emavikini ambalwa ukuze ngihlanze kahle i-tartar phakathi kwamazinyo. Ngithole enye nayo enekhamera nokukhanya ukuze ngibone ukuthi i-tartar inqwabelana kuphi, qiniseka ukuthi ikhona empeleni i-ultra sonic cleaner, ngendlela yokuthi isebenzisa amaza omsindo esikhundleni sokudlidliza (Ezinye izihlanzi zithengiswa njengeziyi-ultra sonic, kodwa zisebenzisa ukudlidliza...); Lezi ezisebenzisa vibration zingalimaza amazinyo. (30€/kanye)
Sebenzisa i-mouthwash okungenani izinsuku ezimbalwa ngemva kokusebenzisa isicoci se-ultra sonic.
Sethemba ukuthi lokhu kuzosiza ukugwema okunzima ukugwinya amaphasela kadokotela wamazinyo esikhathini esizayo :|
Thumela Amathegi: Imihlahlandlela